Soo dejisan Avira Free Security Suite 1.2.145.25926 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesAvira Free Security Suite
Bogga rasmiga ah: Avira Free Security Suite
Avira Free Security Suite – oo ah qalab aasaasi ah oo lagu ilaaliyo lana hagaajiyo waxqabadka kombiyuutarka. Software wuxuu leeyahay antivirus leh teknooloojiyada difaaca daruuriga iyo scannada nuglaanta si si wax ku ool ah loo ogaado oo looga saaro xajinta. Avira Free Security Suite waxaa ka mid ah modul VPN ah oo isku xiraya internetka si aan qarsoodi lahayn una qarin macluumaadka shakhsiyeed inta aad webiga ku rogeyso. Software-ka ayaa ka hortagaya dhammaan dhibaatooyinka la xidhiidha asturnaanta iyo hawlaha internet-ka internetka iyagoo xiraya isku-day kasta oo raadinta shabakadda. Avira Free Security Suite waxay ku siinaysaa inaad isticmaasho qalabka wax lagu naqshadeeyo nidaamka oo kuu oggolaanaya inaad xakamayso isticmaalka korontada, hoos u dhigto waqtiga bilaabitaanka qalabka, fiiri heerarka asturnaanta iyo hubi meel bannaan. Sidoo kale, Avira Free Security Suite waxay taageertaa shaashadda webka si looga ilaaliyo bogagga khatarta ah, hindisaha iyo isku dayga phishing.
Antivirus leh farsamada difaaca daruuriga
Ku keydso dukaanka internetka
Wax-ka-beddelka waxqabadka nidaamka
Soo dejisan Avira Free Security Suite
Arinta Bilaasha ah ee ’Avira Free-’ fayras leh xawaaraha iskaanka ah oo fiican iyo ogaanshaha saxda ah ee fayraska, kaas oo ka dhigaya xogta adeegsadaha iyo sirtaada asturnaan.
Faallo ku saabsan Avira Free Security Suite
Avira Free Security Suite Xirfadaha la xiriira
Tani waa antivirus casri ah oo leh waxyaabo isdhexgal leh si loo xakameeyo nabadgelyada kombiyuutarro dhawr ah oo lagu maareynayo internetka iyada oo loo marayo guddi websaydh oo laga helo daalacayaasha.